Mmekọrịta na akpaaka bụ ihe abụọ m na-agwa ndị ahịa mgbe niile… ndị ahịa kwesịrị iji oge ha rụpụta ozi ha, rụọ ọrụ na ihe okike ha, ma zube ndị na-azụ ahịa ozi ndị ahịa chọrọ ịnụ. Ha ekwesịghị itinye oge ha niile na-ebugharị data site n’otu ebe gaa na-esote. Ọ bụ nkwenye m na Mashups bụ ndọtị nke njikọta na akpaaka na weebụ. Kedu ihe bụ Mashup? A
Izu a, m na-abịa na nke mbụ kwa afọ Mashup Camp na Mountain View, CA. Nkọwa nke mashup dịka Wikipedia bụ 'weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa weebụ nke na-agwakọta ọdịnaya sitere na ihe karịrị otu isi'. Maka m, nke a pụtara ngwa ngwa web jikọtara ọnụ. N'afọ gara aga ma ọ bụ karịa, emeela m ọtụtụ 'Mashups' ma ọ bụ tinye aka n'ọtụtụ Mashups. Bịa ogige mbụ, agbanyeghị, abụrụla ahụmahụ dị ịtụnanya. Nzukọ na